भरतपुर अस्पतालका फार्मासिस्टमाथि दूर्व्यवहार « News24 : Premium News Channel
भरतपुर अस्पतालका फार्मासिस्टमाथि दूर्व्यवहार
चितवन । भरतपुर अस्पतालको फार्मेसीमा कार्यरत कर्मचारीमाथि सोमबार मध्यरातमा अज्ञात ब्यक्तिहरुले दूर्व्यवहार गरेका छन् । उनीहरुले अस्पतालको फार्मेसीमा काम गरिरहेका फार्मासिस्ट प्रभात पौडेलमाथि गाली गलौज र भौतिक आक्रमणसमेत गरेको अस्पताल बिकास समिति युनियनले जनाएको छ ।
युनियनले यस घटनाबारे प्रहरी तथा प्रशासन समक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमबार मध्यरातको १२ बजे अस्पतालको फार्मेसीमा आएका ब्यक्तिहरुले फार्मासिस्ट पौडेललाई औषधि उपलब्ध गराउन किन नसक्ने ? तिमी को हौ ? करारका कर्मचारी भएर ठूला कुरा गर्ने ? तिमीलाई म को हो ? चिनाउन परेको हो ? भन्दै तथानाम गाली गलौज गरेका थिए ।
त्यस्तै उनीहरुले फार्मासिस्टहरुले केही दिन पहिले गरेको आन्दोलनको बिषयमा केही नहुने भन्दै अस्पतालको फार्मेसीमा हुने गरेको अनियमितता रोक्न कसैले नसक्ने भन्दै धम्की दिएका छन् । मदिरामा लठ्ठ उनले अस्पतालको फार्मेसी स्टोरमा काम गर्ने एक कर्मचारी आफ्नो भाई भएको र फार्मासिस्टको आन्दोलनले केही नहुने भन्दै गाली गालौज गरेका छन् ।
यस घटनाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यलय चितवनले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । ति ब्यक्ति कुनै अन्य अस्पतालको कर्मचारी भएको दाबी गरिएको छ ।